ह्याण्डसम हिरो आकाश श्रेष्ठले अहिले पनि गर्छन् पूजालाई माया – Gazabkonews
ह्याण्डसम हिरो आकाश श्रेष्ठले अहिले पनि गर्छन् पूजालाई माया, पूजालाई बिर्सिन नसकेर मध्यरातमा पनि पुगे पूजाको घरमा, आकाशलाई देखेर पूजाकी आमाले सहन सकिनन्
बुढेसकालमा विबाह गरेकी चर्चित कलाकार मिथिला शर्माको घरमा के भयो फेरी ? मिथिला रुँदै अस्पताल पुगिन् , यो दृश्य चलचित्र आमाको हो । हेर्नुहोस् पूरा फिल्म
चर्चित कलाकार लक्ष्मी गिरीले के गरिन् बुहारीलाई यस्तो ? बुहारी र नातिनीलाई दुख दिएको दृश्य सहितको भिडियो बाहिरिएको छ । जसमा आमा छोरीलाई लक्ष्मीले निकै दुख दिएकी छिन् ।
बलेले प्रिज्मासँग पहिल्यै नै सुटुक्क विबाह गरिसकेका रहेछन्, वच्चा सहित प्रिज्मा बलेलाई भेट्न बाहिर निस्किएपछि अहिलेसम्म लुकको सारा रहस्य पर्दाफास भयो
चर्चित नायिका विपना थापा दोस्रो सन्तानको तयारीमा, दोस्रो सन्तानको खुशीयालीमा विपना र उनका पतिले राखे भारतमा भब्य पार्टी, नेता तथा कलाकारहर पुगे विपनाको पार्टीमा
फेरी के भयो चर्चित नायिका शिल्पा पोखरेललाई, भइन् अस्पताल भर्ना, यो दृश्य शिल्पाले अभिनय गरेको एउटा भिडियोको दृश्य हो । हेर्नुहोस् यो भिडियो
पूजा शर्मासँग ब्रेकअप भएलगत्तै साम्राज्ञीलाई लिएर घुम्न निस्किए आकाश श्रेष्ठ, यि दुई एकान्तमा रमाउँदै गरेको भिडियो भाइरल, एक्कासी आकाशलाई साम्राज्ञीले आफ्नो बनाउनुको पछाडी केले गर्यो चमत्कार
कलाकार दिपक मैथाने मगरले जन्मदिनको अवसर पारेर नयाँ सांगीतिक कोसेली ‘बैगुनी’ सार्वजनिक गरेका छन् । साउथ ह्यारो स्थित हाम्रो चौतारी रेष्टुरेन्टमा भव्य कार्यक्रमका बीच कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तमु समाज युकेका संस्थापक अध्यक्ष चित्र बहादुर गुरुङले भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कर्यक्रममा भिडियोमा आवद्ध प्राविधिक एवं कलाकारहरुलाई मायाको चिनो सहित सम्मान गरिएको थियो ।
बेलायतमा छायांकन गरिएको भिडियोमा वरिष्ठ कलाकार मनिष श्रेष्ठ, पहिलो मिसेस युके नेपाल आस्था जोशी, सन्तोष राई, समिर भट्टराई र अर्जुन लिम्बूको अभिनय रहेको छ ।
लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेलको स्वर रहेको उक्त गितमा मैथानेकै शब्द श्रृजना रहेको छ भने म्यूजिक र अरेन्ज बिलन थापा मगरले गरेका छन् । नेपालको गुल्मीमा जन्मिएर बेलायतलाई कर्मथलो बनाएका मैथाने व्यस्थ समयका बावजुत पनि निरन्तर समर्पित छन् ।
‘बैगुनी’ को निर्देशन संचारकर्मी कुशल श्रेष्ठले गरेका हुन् । करिव डेढ दशकदेखि पत्रकारिता सँगसँगै भिडियो निर्देशनमा पाइला चालेका निर्देशक कुशलकै छायांकन र सम्पादन रहेको भिडियोको कलरिङ् नवीन निरौलाले गरेका हुन् ।
बेलायतका रमणीय र प्रसिद्ध स्थानहरुमा छायांकन गरिएको भिडियोमा प्रेम विछोडमा हुने विभिन्न ढङ्गबाट निर्देशक कुशलले गज्जबसँग भिडियोमा देखाएका छन् । भिडियो कलाकार मैथानेकै अफिसियल च्यानल मैथाने इन्टरटेनमेन्ट मार्फत युट्युवबाट रिलिज गरिएको भिडियो हेर्नुहोस्